ကန့်ကွက်မှုများနှင့် ဆိုင်းငံ့ထားရန် တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်သော်လည်း ထိန်းသိမ်းထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၁,၀၈၆-ဦးကို မြန်မာရေတပ်သင်္ဘောဖြင့် မလေးရှားက ပြန်ပို့၊ ကွာလာလန်ပူ၏ အပြုအမူမှာ စစ်အစိုးရအား အသိအမှတ်ပြုရာရောက်ဟု ဝေဖန်ခြင်းခံရ – H2Oupdatenews
ကန့်ကွက်မှုများနှင့် ဆိုင်းငံ့ထားရန် တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်သော်လည်း ထိန်းသိမ်းထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၁,၀၈၆-ဦးကို မြန်မာရေတပ်သင်္ဘောဖြင့် မလေးရှားက ပြန်ပို့၊ ကွာလာလန်ပူ၏ အပြုအမူမှာ စစ်အစိုးရအား အသိအမှတ်ပြုရာရောက်ဟု ဝေဖန်ခြင်းခံရ
စစ်ဖက်အုပ်ချုပ်နေသာ တိုင်းပြည်သို့ ပြန်ပို့ခဲ့လျှင် အန္တရာယ်ရှိသည့်အတွက် ခေတ္တဆိုင်းငံထားရန် တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်သော်လည်း ထိန်းသိမ်းထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၁,၀၈၆-ဦးကို ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒအလျောက် မြန်မာရေတပ်မတော်ပိုင် သင်္ဘော ၃-စီးဖြင့် ပြန်ပို့လိုက်ရာ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ ( မူရင်း ရိုဟင်ဂျာဟုဖော်ပြ ) သို့မဟုတ် ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူများ ပါဝင်ခြင်း မရှိကြောင်း မလေးရှား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အကြီးအကဲက အဂ်ါနေ့၌ ပြောဆိုသည် ဟု Al Jazeera က ယနေ့ ရေးသားသည်။
ကွာလာလန်ပူ တရားရုံးချုပ်က လူပေါင်း ၁,၂၀၀ ခန့်ကို ဗုဒ္ဒဟူးနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၁၀ -နာရီအထိ ယာယီနေထိုင်ခွင့်ပြု၍ တားဆီးကြောင်း အမိန့်ချမှတ်ပြီး နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် ထိန်းသိမ်းထားသူများအား ယခုကဲ့သို့ ပြန်ပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဆို၏။
အုပ်စုအတွင်းရှိလူများတွင် အသက်အန္တရာယ် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ကြောင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းထားသူ တစ်ဒါဇင်ကျော်သည် မလေးရှား၌ အနည်းဆုံး မိဘတစ်ဦးသာ ရှိသည့်ကလေးငယ်များဖြစ်ကြောင်း၊ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့နှှင့် ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံများ အခွင့်အရေးအဖွဲ့တို့၏ လျှောက်ထားချက်ကို လက်ခံသည့်အနေဖြင့် တရားရုံးချုပ်က အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြန်ပို့ခံရသူများသည် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်တွင် ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသူများဖြစ်ပြီး၊ ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူများနှင့် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီတို့ မပါဝင်ပဲ အားလုံးမြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခံရသူအားလုံးတို့ကလည်း အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံရခြင်းမရှိဘဲ ၎င်းတို့ဆန္ဒအလျောက်ပြန်သွားကြရန် သဘောတူခဲ့ကြသည်ဟု လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြီးအကဲ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြသည်။
သို့ရာတွင် တရားရုံးချုပ်အမိန့် သို့မဟုတ် ပြန်ပို့သူ ၁,၂၀၀ ဖြစ်ရမည့်အစား ၁,၀၈၆-ဦးကိုသာ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးရသည်ကို သတင်းထုတ်ပြန်ရာ၌ ရှင်းလင်းဖော်ပြထားခြင်း မရှိချေ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် တရားရုံးချုပ်၌ ၎င်းတို့အား ကြားနာမည်ဖြစ်ပြီး ခိုလှုံခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ UNHCR အဖွဲ့အား ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးရန် တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့၏ မလေးရှားနိုင်ငံ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ကတ်တရီးနားဂျိုရီနီ မယ်လီယာမော့ဗ်က စောစောပိုင်း၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ .
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ -ရက်နေ့တွင် စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းယူခဲ့သောမြန်မာပြည်သို့ ထိန်းသိမ်းထားသူအုပ်စုကို ပြန်ပို့ပေးခြင်းသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြန်လည်နေရာချထားရေး မူဘောင်များအား ချိုးဖောက်သည့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့က ကနဦး ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံအား မြန်မာစစ်ဖက်က ချုပ်ကိုင်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင် ရွေးကောက်ခံ ခေါင်းဆောင်များကို ထိန်းသိမ်းခဲ့ရာ စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည့် ဒေသတွင်းလက်တစ်ဆုပ်စာနိုင်ငံများအနက် မလေးရှားလည်းအပါအဝင်ဖြစ်သည်။
မလေးရှားသည် ဒေသတွင်း အနှံ့အပြားမှ သန်းနှင့်ချီသော အထောက်အထားမဲ့/အထောက်အထားကိုင်ဆောင်သူရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ နေထိုင်ရာဖြစ်နေသည်။ မလေးရှားလူမျိုးများ လုပ်ကိုင်လိုခြင်းမရှိသော လုပ်ခလစားနည်းအလုပ်အကိုင်များတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။
မလေးရှားက ပြန်ပို့လိုသည့် ခိုလှုံသူနှင့် ဒုက္ခသည် ၁၈၀,၀၀၀ ခန့်ရှိနေပြီး ၁,၂၀၀-ဦးကို ပြန်လည်ခေါ်ယူရန် မြန်မာရေတပ်မတော်က သင်္ဘော ၃- စီးအား စေလွှတ်ခဲ့ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာ မဟာမင်း ကြီးရုံး UNHCR ၏ အဆိုအရ သိရှိရသည်။
မလေးရှား၏ အစီအစဉ်သည် လူအများအား အသက်အန္တရာယ်ရှိစေသည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်ရေးဖြင့် ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းစွာ အာဏာသိမ်းယူခဲ့သူတို့အား တရားဝင်ဖြစ်စေကြောင်း Fortify ၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ အေမီစမစ်က ပြောကြား၍ ပြည်နှင်ဒါဏ်ပေးခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် တောင်းဆိုသည်။
(( မလေးရှား ထိန်းသိမ်းရေး စခန်းများတွင် နေရပ်ပြန်ရန် စောင့်ဆိုင်းနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၁,၁၀၀ ခန့် ကို တင်ဆောင်လာသည့် စစ်ရေယာဉ် ၃ စင်းမှာ မလေးရှားမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ယနေ့ ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ကြောင်း မြန်မာလူမှုကူညီရေးအသင်း (မလေးရှား) ၏ ဥက္ကဌ ဦးစန်းဝင်းက ပြောဆိုသည်ဟု #ပြည်မြန်မာဂျာနယ် က ယနေ့ဖော်ပြသည်။
အဆိုပါ စစ်ရေယာဉ်သုံးစင်းမှာ #မုတ္တမစစ်ရေယာဉ်၊ #သံလွင်စစ်ရေယာဉ် နှင့် #ဆင်ဖြူရှင် စစ်ရေယာဉ်တို့ ဖြစ်ပြီး မလေးရှားနိုင်ငံစံတော်ချိန် ညနေပိုင်း ၅ နာရီ တွင် ပဲရပ်ပြည်နယ်ရှိ မလေးရှား ရေတပ်စခန်း မှ ထွက်ခွာသွားခြင်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။.
နေရပ်ပြန် မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် မြန်မာလူမှုကူညီရေး အသင်း (မလေးရှား) နှင့် စေတနာရှင်များက အဝတ်အစားများ၊ ဖိနပ်များနှင့် လိုအပ်သည်များကို လှူဒါန်းလိုက်ကြကြောင်း ပြည်မြန်မာက ဆက်လက် ဖော်ပြသည်။ ။ သတင်း ဘာသာပြန်သူ ))
((( Al Jazeera., 23 Feb 2021, “ Malaysia deports 1,086 Myanmar nationals despite court order.” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာ ပြန်ဆိုသည်။ )))
Previous Previous post: ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပြီး နေ့လယ်က တင်တဲ့ မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Reuters သတင်းဟာ မမှန်ဘူးလို့ ၂၂ နာရီခန့် အကြာမှာ အင်ဒိုနီးရှားက ငြင်းဆိုကြောင်း Channel News Asia က ယခုဖော်ပြပါတယ်
Next Next post: အင်ဒိုနီးရှားက သံတမန်နည်းလမ်းဖြင့် ကြိုးပမ်းနေစဉ် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဆန္ဒပြမှုများ ပိုမိုမြင့်တက်၊ မြန်မာအရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းမှားယွင်းကြောင်း အင်ဒိုနီးရှားက ငြင်းပယ်သော်လည်း Reuters ထပ်မံစွပ်စွဲဖော်ပြ။ အင်ဒိုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ ဘန်ကောက်တွင် တွေ့ဆုံ